China SEBIC style new vintage city promotor 36V 250W 700C enduro Retro bisikileta elektrika sy mpamokatra | Funncycle
maotera Brushless, 36V 250W aoriana Motor
Fitaovana amin'ny frame Carbon Steel
Laharana maodely BEF-ST700R
filanjana 700 * 38C Hi-folo vy, TIG nohosorana
Fork Hi-Ten vy, TIG nohosorana
notapahiny PROMAX V novakiny
kodiarana 700 * 38C A / V Mainty
Bateria 36V 7.5AH, bateria Lithium
miseho Fampisehoana LCD 5-dingana
36V 7.5AH batterie lithium azo esorina, mba hahafahanao mitondra ny bateria any an-tranonao na any amin'ny biraonao hihaona indray.
Fotoana famakiana: ora 6-8. Manodidina ny 18-20 kilaometatra isan'ora,
Hafainganana Max: 20 mph / h (Lanjan'ny mpitaingin-tsoavaly <220LBS, làlana fisaka sy hery feno) motera aoriana tsy misy borosy 250W.
Fanehoana LCD Panel: fampisehoana herinaratra, fitsangantsanganana haingam-pandeha 6km, fampisehoana tsingerina haingam-pandeha dimy.
Carbon vy vy. Izahay dia mandinika tsara ny antsipiriany tsirairay amin'ny singa tsirairay, ny fantsom-pandrefesana ergonomika, seza azo ovaina ary kodiarana mahatohitra fanoherana slip.
Fitaovana mitaingina telo, bisikileta tsy azo ahodina sy bisikileta manampy, afaka misafidy izay tianao ianao. Mety ho an'ny mpitaingina eo anelanelan'ny 165-190cm. City Ready izay traikefa tsara bisikileta mandeha bisikileta misy kodiarana 38mm amin'ny kodiarana 700C.
Teo aloha: SEBIC 26 mirefy aloywheel tanàna bisikileta fanamoriana herinaratra maotera
Manaraka: SEBIC fahazavana vaovao mahafinaritra 20 inch mivalona bisikileta mini